Budata Active GIF Creator maka Windows
Budata Active GIF Creator
Free Budata maka Windows (13.41 MB)
Budata Active GIF Creator,
Onye okike GIF na-arụ ọrụ bụ mmemme okike GIF bara uru nke na-enyere ndị ọrụ aka imepụta GIF.
Usoro okike GIF nwere ike iyi ka usoro adịghị mma na mbụ. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahapụ ọrụ a, na-ekwenye na ịme GIF bụ usoro siri ike na nke siri ike. Agbanyeghị, enwere ike iji GIF mee ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ, yana onyonyo mgbasa ozi na mbinye aka dijitalụ nwere ike ịmepụta. Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ngwọta omenala maka ọrụ okike GIF.
Onye okike GIF na-arụ ọrụ na-enye anyị ụzọ bara uru isi mee nke a. Onye Okike GIF nọ nọrụ na-akwado ụdị faịlụ onyonyo a na-ejikarị dị ka JPG, BMP, PNG, PCX, PSD, ICO, TGA, na WMF, ma na-enyere gị aka ijikọ faịlụ onyonyo dị iche iche nụdị a nime ihe ngosi GIF.
Onye Okike GIF nọ nọrụ nwere interface dị ọcha. Ọ bụ ezie na interface ahụ adịghị ele anya nke ọma mara mma, ọ na-egbo mkpa ọ dị nihe gbasara ọrụ. A na-etinye atụmatụ nke mmemme ahụ nke ọma na windo isi na enwere ike ịnweta ha ngwa ngwa.
Onye Okike GIF na-arụ ọrụ nwekwara ike ịgbakwunye nghọta na eserese GIF. Nihi njirimara a, anyị nwere ike ịmepụta animation nke na-ekwu maka ebumnuche dị iche iche nke ọma. A na-ahapụkwa anyị ka anyị jiri ngwa ndezi dị iche iche dị ka ahịhịa, pen na nchicha dezie ihe ngosi GIF. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgbanwe ọdịdị nke oyiyi na GIF animations, usoro ihe omume na-enye ohere ka anyị ezipụta mgbanwe oge netiti oyiyi.
Active GIF Creator Ụdịdị
Nha faịlụ: 13.41 MB
Mmepụta: WSoft Lab